Umaki: amathuba we-pr | Martech Zone
Maka: amathuba we-pr
Ama-60% amaMelika azokwahlulela inkampani yakho ngokususelwa ekubeni khona kwakho ku-inthanethi. Cabanga ngalokho isikhashana. Yize iwebhusayithi yakho ibamba iqhaza elibalulekile ebukhoneni bakho be-inthanethi, kunokunye. Abantu bafuna umkhiqizo wakho bese bahlulela inkampani yakho ngokuya ngalokho okuvelayo ezinjini zokusesha. Ukutshala imali ku-inthanethi eku-inthanethi kukusiza ukuphatha ubukhona bakho obuku-inthanethi Engikuthandayo ngale infographic kakhulu ukuthi kunikeza okunye